बन्दकर्ताद्वारा औषधि बोकेको ट्रकसहित दर्जन गाडीमा तोडफोड | We Nepali
बन्दकर्ताद्वारा औषधि बोकेको ट्रकसहित दर्जन गाडीमा तोडफोड
२०७२ मंसिर ४ गते १०:०९
वीरगन्जको ओम आश्रमस्थित नेशनल ट्रेडिङ्ग लिमिटेड कार्यालय आगाडि आन्दोलनरत मधेस केन्द्रीत दलका कार्यकर्ताले गरेको आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएको औषधि बोकेको एउटा ट्रक । आगजनीबाट करिब रु. २० लाख मूल्य बराबरको औषधि जलेर नष्ट भएको छ । तस्बिर ः बिजय कुमार महतो, पर्सा, रासस
विराटनगर, ४ मङ्सिर । संयुक्त मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले आज मोरङमा करिब एक दर्जन गाडी तोडफोड गरेका छन् ।
विराटनगरको पूर्वी भागसँग जोडिएको कटहरिस्थित नेसनल सिमेन्ट उद्योगको परिसरमा रोकेर राखिएका आठवटा ट्रक, दुई मोटरसाइकलका साथै कार्यालयमा समेत तोडफोड गरेका हुन् । साथै कटहरिको नहरमा को१च ७९९७ नम्बरको एम्बुलेन्समा पनि तोडफोड गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ ।
बिरामी बच्चालाई बोकेर विराटनगर आउँदै गरेको सो एम्बुलेन्समा तोडफोड गरिएको हो । प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रमोद खरेलले बन्दकर्ताले गाडीमा ढुङ्गा प्रहार गरी भाग्ने गरेको र परिसरमा पार्किङ गरी राखिएको ट्रकहरुमा तोडफोड गरेका जानकारी दिए । उनका अनुसार बन्द तथा तोडफोडमा संलग्न आठजना बन्दकर्तालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ ।
उता, आन्दोलनरत मधेस केन्द्रीत दलका कार्यकर्ताले बीरगन्जमा औषधि बोकेको एउटा ट्रकमा आगजनी गरेका छन् ।
वीरगन्जको ओम आश्रमस्थित नेशनल ट्रेडिङ्ग लिमिटेड कार्यालय आगाडि औषधि बोकेको ना २ ख ८२९२ नम्बरको एउटा ट्रकमा आन्दोलनकारीले गएराति करिब एक बजे आगजनी गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार आगजनीबाट करिब रु. २० लाख मूल्य बराबरको औषधि जलेर नष्ट भएको छ । वीरगन्जबाट ट्रकमा लोड गरिएको उक्त औषधि जनकपुर पठाउने तयारी गरिरहेको बेला आन्दोलनकारीले आगजनी गरेका हुन् ।
यसैगरी, आन्दोलनकारीले आज बिहानैदेखि वीरगन्जका विभिन्न ठाउ“मा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । तिहार र छठ पर्वलाई दृष्टिगत गरेर बन्द कार्यक्रमलाई केही खुकुलो बनाए पनि उनीहरुले आज बिहानैदेखि वीरगन्जका विभिन्न ठाउ“मा टायर बालेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
प्रदर्शनकारीले बिहानदेखि नै वीरगन्जको नगवा, बिर्ता, घन्टाघर, बसपार्क, मुर्लीचोक, राधेमाई चोक, रानीघाटलगायत सहरका विभिन्न भागमा बाटोमा टायर बालेर प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।
विभिन्न नारा लगाउ“दै प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीले मोटरसाइकल, रिक्सा र टाँगासमेत चल्न नदिएको बताइएको छ ।
स्थिति अराजक हुन नदिन वीरगन्जमा व्यापक मात्रामा सुरक्षाकर्मीलाई परिचालन गरिएको र आवश्यक परे सम्पूर्ण उपाय अवलम्बन गर्ने पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज घिमिरेले बताए ।